तोडियो एकैपटक ९ बच्चा जन्माएकी महिलाको रेकर्ड, अर्की महिलाले १० बच्चा जन्माइन्…. – UPDATE LINK
तोडियो एकैपटक ९ बच्चा जन्माएकी महिलाको रेकर्ड, अर्की महिलाले १० बच्चा जन्माइन्….
काठमाडौं। अघिल्लो महिना मात्र एकैपटक ९ बच्चा जन्माएर विश्वरेकर्ड बनाएकी मालीकी एक महिलाको रेकर्ड एक महिनामै तोडिएको छ । दक्षिण अफ्रि’काकी एक महिलाले एकै’पटक १० बच्चा जन्माएर एकैपटक सबैभन्दा धेरै बच्चा जन्माएको नयाँ रेकर्ड ब’नाएकी छिन् । एक महि’नाअघि मालीकी महिला हलिमा सिसीले मोरक्कोको एक अस्पतालमा एकैपटक ९ बच्चा जन्मा’एकी थिइन् ।
समाचार अनुसार ७ जूनका दिन ३७ वर्षकी गोसि’यामी धमारा सिटहोल नामकी महिलाले ए’कैपटक १० बच्चा जन्माएकी छिन् । उनले ७ छोरा र ३ छोरी जन्माइन् । गर्भावस्था’को जाँचको क्रममा उनलाई डाक्टरले उनको गर्भमा ६ बच्चा हुन सक्ने बता’एका थिए तर जन्मिँदा अपेक्षा गरिए’का भन्दा ४ बच्चा धेरै जन्मिए । १० बच्चा जन्माएका दम्पती निकै कुसी छन् । उनीहरुको परिवारमा उत्स’वको माहोल छ ।
सिट’होलले स्थानीय मिडियासँग कुरा गर्दै आफ्नो गर्भावस्था&लाई लिएर आफैं चकित भएको बता’इन् । द सनको रिपोर्टअनु’सार उनका सबै बच्चा पूर्ण रुपमा स्वस्थ भएको बता’इएको छ । बच्चाहरुलाई आगामी केही महिना’सम्म इन्क्युबेटरमा राखिनेछ । सिटहोलले प्राकृ’तिक रुपमै गर्भधारण गरेकी थिइन् । गर्भाव’स्थाको क्रममा आफूलाई निकै अस’हज भएको उनले बता’इन् ।